Digg အကျိုးသက်ရောက်မှု - နိဂုံး ... ဒါဟာကူညီသလား။ | Martech Zone
Digg ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု - နိဂုံး \_ t
စနေနေ့, သြဂုတ်လ 5, 2006 ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 5, 2017 Douglas Karr
ငါအကြောင်းရယ်စရာဗီဒီယိုတင်တဲ့အခါ ဘီလ်ဂိတ်နှင့်နပိုလီယံ Dynamiteကျွန်ုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ Digg သည်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်အားအခြားသူများအားဖော်ထုတ်ခြင်းအပေါ်မည်သည့်သက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုတွေ့မြင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ, ငါ့ရည်ရွယ်ချက် "Digg Effect" ၏နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများကိုပြသရန်ဖြစ်သည် နော on Okdork ဒီတစ်ခုပေါ်မှာငါ့ကိုရိုးသားစောင့်ရှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
“ Digg Effect” ဆိုသည်မှာ Digg မှတစ်ဆင့်အခြား Digger မှစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုတင်လိုက်သောအခါသင်ဆိုက်ကရရှိသောထိခိုက်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆုံးစွန်သောမေးခွန်းကကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောမည်သူမဆိုကောင်းကျိုးတစ်စုံတစ်ရာပြုမည်လားဆိုသည်မှာဖြစ်သည်။ (အကယ်၍ သင်သည်ဤစမ်းသပ်မှု၏အပိုင်း ၁ ကိုဖတ်လိုပါကကိုနှိပ်ပါ ဒီမှာ).
စာရင်းအင်းများ (ဒီ Digg အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ကြီးမားသောတကယ့်ကိုကြီးမားသော)
ငါတစ်နေ့စောစောစီးစီးဒီသတင်းပို့လိမ့်မယ် ... သင်ဇယားအပေါ်နောက်ဆုံးအချက်အတော်လေးနိမ့်သည်ကိုသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စာရင်းဇယားတွေကိုအပြည့်အ ၀ မကြေညာလို့ပဲ။
ကျွန်ုပ်၏ကြီးမားသောထိခိုက်မှုများပြီးနောက်တစ်ပတ်အကြာ၌ Digg မှလမ်းကြောင်းအချို့ရရှိသည်။ သို့သော်ပထမဆုံးအကြိမ်လည်ပတ်မှုနှင့်အကြိမ်ကြိမ်လည်ပတ်မှုအရေအတွက်သည် ၆.၃၈% မှ ၁၁.၇၇% အထိတိုးတက်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်၏“ တူးသူ” အချို့သည်ကျွန်ုပ်၏ site ကို“ dugg” ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏အစာကျွေးခြင်းတွင်စာရင်းသွင်းထားသောရှေးရှေးအရေအတွက်သည်သုံးဆတိုးပွားလာပြီးနေ့စဉ်ဖတ်ရှုနေသော (အရေအတွက်အားဖြင့်စာရင်းဇယားများအရ) Feedpress ပါ) ။ ယေဘူယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သို့နေ့စဉ်လာရောက်လည်ပတ်သူ ဦး ရေသည် ၃၀၀% မြင့်တက်သည်။ Digg event ကိုဖုံးလွှမ်းရန်စကေးသည်တက်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ဂရပ်များပေါ်တွင်ကြည့်ရှုရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်ဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်လမ်းကြောင်းသည်အတော်လေးတက်သည်။
ဒါကောင်းလား။ ဖြစ်ကောင်း! Digg အဖြစ်အပျက်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်၏ဆိုက်သို့ရောက်လာသည့်ထူးဆန်းသည့်လူ ၄၀၀၀ အနက်မှ ၁၀၀ သို့မဟုတ်ထို့ထက်ပိုသောစာဖတ်သူများကိုကျွန်ုပ်၏ဆိုဒ်သို့နေ့စဉ်ထည့်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်တော့်ကိုမှားအောင်မလုပ်ပါနဲ့၊ ဒါကဆိုးဝါးတဲ့ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနှုန်းပါ။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့၊ ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုသူအနည်းငယ်ဟာကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်ကိုတကယ်စိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်။ သင်၏ Yoga စတူဒီယိုကိုသတင်းစာ၌ကြော်ငြာခြင်းနှင့်ဆင်တူသည်။ သေချာတာပေါ့၊ လူ ဦး ရေတစ်သန်းကဒီကြော်ငြာကိုကြည့်ချင်ကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အားလုံးနီးပါးကဂရုမစိုက်ကြဘူး။
ဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူများ / စာရင်းပေးသူများနှင့်မသက်ဆိုင်သောဗွီဒီယိုများကိုကျွန်ုပ်ရှောင်မည်ထင်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင် Marketing, Automation, သို့မဟုတ် Indianapolis နှင့်ပတ်သက်သောဗီဒီယိုရှိပါကကျွန်ုပ် site ကိုထပ်မံမြှုပ်နှံရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းယူလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်အပြင်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဘလော့ဂ်ကိုဘာမှမပြောဘဲနေတဲ့သူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကျွန်တော်သိပ်စိတ်မပူပါဘူး။
Tags: diff အကျိုးသက်ရောက်မှုDigg
Douglas Karr Saturday, August 5, 2006 Thursday, January 5, 2017
စာရေးဆရာ Tom Morris ကပြန်လည်တုံ့ပြန်သည်။ အကယ်၍ Harry Potter General Electric ကိုလုပ်ခဲ့လျှင်
သြဂုတ် 5, 2006 မှာ 1: 11 AM
နောက်ဆက်တွဲအကြီး ငါဆက်စပ်မှုအကြောင်းကိုလုံးဝသဘောတူသည်။ ငါကဲ့သို့သောအချို့သောသူသည်မိမိပတ်လည်၌ရပ် နေ၍၊
ဧပြီ 11, 2007 မှာ 10: 49 pm တွင်
ငါဒီ post ဟောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက် စာမူ Digg ပြီးနောက်စာမျက်နှာများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဆိုက်၏ထူးခြားသော visitors ည့်သည်များနှင့်ကျွန်တော်သဘောတူသည်။ သို့သော်အရည်အသွေးကောအသို့နည်း။ ဒီ visitors ည့်သည်တွေလုံးဝပြန်လာသလား။ ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုကြည့်ရတာစိတ်ဝင်စားစရာပါ။
ဧပြီ 12, 2007 မှာ 6: 36 AM
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါအရည်အသွေးကိုအဲဒီမှာမထင်ကြဘူး။ ၎င်းသည်ငါ Digg နှင့်ကြုံခဲ့ရသည့်အမှားများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့အမျိုးအစားများသည်အလွန်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရာအကြောင်းအရာကိုပရိသတ်အတွက်မရည်ရွယ်ပါ။ အခြား social bookmarking ဆိုဒ်များသည် Digg မဟုတ်သောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပစ်မှတ်ထားရာတွင် ပို၍ ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်သည်။
အထက်ကူးပြောင်းနှုန်းသည် ၀.၂၅% အောက်သာရှိသည်။ Digg သည်စာဖတ်သူများကိုဆက်လက်တူးယူပြီးမှဆက်လက်ယူဆောင်လာသည်။